के ‘कोभिड भ्याक्सिन’ नजिक पुगेकै हो त बेलायत ? – Nepalilink
15:04 | १९:४९
के ‘कोभिड भ्याक्सिन’ नजिक पुगेकै हो त बेलायत ?
डा ओमप्रसाद गौतम अप्रिल २२, २०२०
वाटर एड यूके’ मा ‘सिनियर वास मेनेजर ‘का रुपमा कार्यरत जनस्वास्थ्य विज्ञ डा ओमप्रसाद गौतम
यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्ने ‘कोभिड १९’ नामक रोगसंगको लडाईंमा छ । जसले सिंगो मानव जगतलाई स्वास्थ्यमा मात्र नभइ सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक हिसाबले समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको ‘कोभिड १९’ नयाँ रोग हो । जुन रोगको औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । यो रोग लागिसकेपछि यसलाई निको पार्ने औषधि नभएको अवस्थामा यो रोग नै लाग्नबाट बचाउने ‘भ्याक्सिन’ आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
अहिले धेरै मुलुकहरुमा ‘कोभिड १९’ विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) विकास गर्ने पहलहरु भइरहेका छन् । बेलायतमा पनि कैयौं समूहले कोशिस गरिरहेका छन् । यहाँकै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गर्दै गरेको ‘क्यान्डिडेट भ्याक्सिन’ यहि विहिबारदेखि मानिसमा परीक्षण शुरु गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । जसले धेरै मानिसहरुमा ठूलो आशा जगाएको छ ।
के यो सांच्चिकै उपलब्धि हो ?
‘कोभिड १९’ को पहिलो केस गत डिसेम्बर १९ मा पुष्टी भएको थियो । यसर्थ यो रोग देखिएकै ५ महिना मात्रै बित्दै गर्दा यसविरुद्धको ‘भ्याक्सिन’ मानिसमा परीक्षण गर्ने तहसम्म आइपुग्नुलाई ‘क्वीक टर्न अराउण्ड’का रुपमा लिन सकिन्छ । जुन आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । ‘भ्याक्सिन’ विकासको प्रक्रियामा यसलाई पहिलो महत्वपूर्ण फड्कोका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
तर यहाँनेर बिर्सिनै नसक्ने अर्को तथ्य पनि के छ भने, यो केबल परीक्षणका लागि तयार गरिएको ‘क्यान्डिडेट भ्याक्सिन’ हो । जुन मात्र परीक्षणका क्रममा छ । यो ‘भ्याक्सिन’ सफल हुने जति सम्भावना छ, असफल हुने पनि त्यति नै सम्भावना छ ।
‘भ्याक्सिन’को परीक्षण ‘ट्रायल एण्ड इरर’ को क्रममा चलिरहन्छ । ‘ट्रायल’ गर्ने, ‘इरर हुन्छ । फेरि ‘ट्रायल गर्ने’, फेरि ‘इरर’ हुन्छ । र यो क्रम चलिरहन्छ । कहिले, कुन चरणमा जाँदा सफल हुन्छ भन्ने थाहा हुंदैन । सफल हुन्छ, हुँदैन भन्ने समेत टुंगो हुँदैन ।
कुनै पनि रोगको ‘भ्याक्सिन’को विकास हुन सामन्यतया १२ देखि १८ महिनासम्म लाग्छ । यो औसत समय हो ।
तर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले आउँदो सेप्टेम्बर महिनासम्ममा ‘कोभिड १९’ विरुद्धको भ्याक्सिन तयार गरिसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । औसत भन्दा धेरै थोरै र यति छोटो समयमै ‘भ्याक्सिन’ तयार हुनु आफैमा चुनौतिपुर्ण छ । यदि उनीहरुको लक्ष्यअनुरुप नै यहि समयसीमामा ‘भ्याक्सिन’ तयार हुन सक्यो भने त्यसलाई महत्वपुर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
यस अर्थमा अक्सफोर्डले बनाउन लागेको ‘भ्याक्सिन’ सबैभन्दा छिटो तयार भयो भने त्यो आउँदो सेप्टेम्बरसम्म हुनेछ । तर त्यतिञ्जेल ‘भ्याक्सिन’ तयार भइसक्छ भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ भने छैन, अझै धेरै समय पनि लाग्न सक्छ । त्यसो त यो ‘भ्याक्सिन’को परीक्षण सफल हुन्छ नै भन्ने पनि ‘ग्यारेन्टी’ छैन, असफल हुने जोखिम पनि रहन्छ ।
यदि लक्ष्यअनुसार नै परीक्षण सफल भयो र सेप्टेम्बरसम्ममै ‘भ्याक्सिन’ तयार भयो भने पनि आम मानिसहरुको लागि कहिलेसम्म उपलब्ध हुोला भन्ने अर्को ठूलो प्रश्न छ । अहिले भर्खर परीक्षण शुरु हुंदै गरेको अवस्थामा अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।
तर बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत बेलायतमा ‘भ्याक्सिन’ तयार भएको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता बेलायतलाई नै दिइने बताएका छन् । यसबाट पनि के आँकलन गर्न सकिन्छ भने बेलायतमा बनेको ‘भ्याक्सिन’ पहिलो चरणमा बेलायतकै लागि प्रयोग गरिनेछ ।
यसको उत्पादन कसरी र कुन तहमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले पनि यसको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । शुरुमै पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा उच्च जोखिममा रहनेहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो क्रममा बेलायतमा रहेका अन्य आम मानिसहरु र त्यसपछि मात्रै बेलायतबाहिर आपूर्ति हुन सक्छ ।
के हेरिन्छ परीक्षणमा ?
अक्सफोर्डले तयार गर्दै गरेको ‘भ्याक्सिन’ मानिसहरुमा परीक्षण गर्ने क्रममा आउनु भनेको यसले केहि प्रारम्भिक चरण पार गरिसकेको छ । यो ‘क्यान्डिडेट भ्याक्सिन’ कुन-कुन जनावरमा परीक्षण गरियो भन्ने नखुलाइएपनि फरक फरक जनावरमा गरिएको परीक्षण सफल भइसकेको हुनुपर्छ ।
अब मानिसहरुमा परीक्षण गर्दा पहिलो कुरा यसको ‘इफिकेसी’ हेरिन्छ । कति जना मानिसहरुमा परीक्षण गर्दा त्यसको कति प्रतिशतलाई यो ‘भ्याक्सिन’ले सुरक्षित गर्न सक्छ त भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
दोस्रो महत्वपुर्ण पक्ष, यो ‘भ्याक्सिन’ले प्रदान गर्ने ‘इम्युनिटी’को हो । एकपटक ‘भ्याक्सिन’ लगाइसकेको मानिस कति लामो समयका लागि सुरक्षित रहन सक्छ र कति वटा ‘भ्याक्सिन’ लगाएपछि ‘डोज’ पूरा हुन्छ भन्ने परीक्षणको विषय हुन्छ । त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो खोप लगाएको व्यक्तिमा कुनै नकारात्मक असरहरु देखिन्छन् कि देखिंदैनन् भन्ने पनि हो । ‘भ्याक्सिन’ले कुनै गम्भीर ‘साइड इफेक्ट’हरु सिर्जना गरेको अवस्थामा परीक्षण सफल हुन सक्दैन ।
भ्याक्सिन नआउइञ्जेल महामारी रहन्छ त ?
अहिलेको अवस्थामा न त ‘कोभिड १९’ लाग्न नदिने ‘भ्याक्सिन’ छ न त यो रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने औषधि । यहि अवस्थामा पूर्ण रुपमा महामारी नियन्त्रण सम्भव देखिंदैन ।
बेलायतसहित कैयौं मुलुकमा अहिले ‘लकडाउन’ छ । ‘लकडाउन’का कारण ‘मेन्टेन’ भएको ‘फिजिकल डिस्टेन्सिङ’का कारण संक्रमण अब बिस्तारै घट्दै जानेछ । तर संक्रमण घट्न थाल्यो भनेर ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्दा ‘फिजिकल डिस्टेन्सिङ’ पनि घट्ने र संक्रमण फेरि बढ्न थाल्ने उच्च जोखिम रहन्छ । यसर्थ संक्रमणमा कुन तहसम्मको गिरावट आएपछि कसरी ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्ने क्रम शुरु हुन्छ भन्ने विषयले पनि महामारी कुन रुपमा अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
हुन त ‘हर्ड कम्युनिटी’को कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । ८० प्रतिशत मानिस एकपटक संक्रमित बनेर ठीक भइसकेपछि बाँकी २० प्रतिशत पनि सुरक्षित रहन्छन् भन्ने यो अवधारणा पनि अझै प्रमाणित हुन सकेको छैन । एकपटक संक्रमित बनेर निको भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि संक्रमण हुंदैन भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ नभइन्जेल यसबारे ढुक्क हुन मिल्ने अवस्था छैन ।
यसबीचमा औषधिको विकास हुन सक्यो भने पनि धेरै ठूलो राहत अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संक्रमण भइहालेको अवस्थामा पनि औषधिको सहाराले धेरैको जीवन जोगिन सक्छ । तर पनि ‘कोभिड १९’ परास्त गरी यस महामारीलाई विश्वबाटै निर्मुल गर्ने अवस्थासम्म पुग्नको लागि यसविरुद्धको ‘भ्याक्सिन’को विकास नै अपरिहार्य रहन्छ ।
(‘वाटर एड यूके’ मा ‘सिनियर वास मेनेजर ‘का रुपमा कार्यरत जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. ओमप्रसाद गौतमसंगको संवादमा आधारित )
यो पनि पढौं : बेलायतमा कोरोनाविरुद्धको खोपको ‘मानव परीक्षण’ शुरु हुँदै